Shirkii Kismaayo oo furmay iyo madxweyne Xasan oo yiri: Walaalow ayaa xal ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shirkii Kismaayo oo furmay iyo madxweyne Xasan oo yiri: Walaalow ayaa xal ah
16th September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta gaaray Kismaayo ayaa furay shirka dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka iyo Gedo oo lagu xalinayo khilaafaadka u dhaxeeya dadka gobolladaas.
Madaxweyne Xasan ayaa sheegay in dowladdu ay soo dhaweyneyso xallinta cid kasta oo qabta cabasho ku aadan ka qeyb qaadashada maamulka KMG ah ee Jubba.
Shirka oo ay ka qeyb galeen ergo ka kala socoto bulshada ku dhaqan gobolada Jubbooyinka, Wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya jooga iyo xubno kale.
Ugu horeyn waxaa shirka ka hadlay Hogaamiyaha Maamulka KMG ah ee Jubba Axmed Maxamed Islaam “Axmed Madoobe” ayaa sheegay in shirka ay ku soo dhaweynayaan cid kasta oo dooneyso inay qeyb ka noqoto arrimaha dib-u-heshiisiinta.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in shirkan uu ahmiyad gaar ah u leeyahay bulshada ku dhaqan gobolada Gedo, Jubbada Hoose iyo Jubada Dhexe.
Wakiilka urur goboleedka IGAD Maxamed Cabdi Afeey ayaa xusay in ay soo dhaweynayaan shirka loo qabanayo bulshada degta Gobolada Jubbooyinka, waxaana uu intaa ku daray in ay taageerayaan go’aanada ka soo baxa shirka.
Madaxweyne Xasan oo khudbad ka jeediyay shirka dib-u-heshiisiinta, isla markaana si rasmi ah u furay shirka ayaa ku booriyay hogaamiyaha Maamulka KMG ah ee Jubba uu dhageysto dadka daneynaya inay talooyin ku biiriyaan shirka dib-u-heshiisiinta iyo hanaanka ku aadan Maamul u sameynta bulshada ka soo jeeda saddexda gobol ee kala ah Gedo, Jubbada dhexe iyo Jubbada Hoose.
“Soomaaliya guud haan dhibaatooyin ayay kala tirsanayaan laakiin waxaa wax lagu xalin karaa, waa walaaloow aan wada hadalno, oo la is dhageysto, isla markaana la uruuriyo talooyinka wax galka ah ee qeyb ka qaadan kara dhismaha maamul loo dhanyahay” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa sheegay in guul wax ku ool ah laga soo saari doono shirka dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka, waxaana uu ku booriyay ka qeyb galayaasha shirka inay dar dargeliyaan waxkasta oo isu soo dhaweyn kara bulshada gobolladasi ku dhaqan, ayna ka fogaadaan wax keeni kara is qab qabsi.
“Waxaan rabaa in aan soo jeediyo labo talo oo ah in tan koowaad shirkan dib-u-heshiisiinta lagu xaliyo waxkasta oo khilaaf ah ee jira, si tan xigta loogu gudbo wajiga labaad ee ah sameynta iyo dhameystirka Maamulka” ayuu hadalkiisa ku soo koobay Madaxweynaha dalka.
Madaxweynaha ayaa Wakiilada beesha caalamka ee shirka goob jooga ka ah ugu mahadceliyay fududeynta shirka, gaar ahaan Urur Goboleedka IGAD. Madaxweynaha ayaa furitaanka shirka kaddib wuxuu u duulay magaalada Muqdisho.
Daawo sawirrada degmada Baraawe ee loo bir tumanayo
R W Cabdi Weli oo Birmingham kula kulmaya qeyb ka mid ah jaaliyadda Soomaalida